अख्तियारको पञ्जाबाट कसरी उम्के ८ लाख घुस लिएका अध्यक्ष राउत ? - The Public Today
जनकपुरधाम, फागुन १८ गते : धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत ८ लाख रुपैयाँ घुस रकम फालेर भागेको विषयले अहिले बटेश्वर गाउँपालिका तरंगित भएको छ । अध्यक्ष राउत के प्रयोजनमा कसरी घुस लिए ?, कसरी अख्तियारले रकम बरामद गर्यो ? अथवा उ गाडीबाट हाम फालेर कसरी उम्किन सफल भए ? लगायतको प्रश्न गाउँबासी लगायतमा चाँसोको विषय बन्नु स्वभाविक हो ।
यधपि अध्यक्ष राउत गाडीबाट हामफालेर भागेपछि स्थानीयमा अख्तियारप्रति विभिन्न शंका उब्जेको छ । उनी आफुले गरेको भ्रष्टाचार तथा घुसखोरीबाट संरक्षण पाउन नेपका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेको स्थानीयहरु बताउँछन् । अहिले ओलिकै सरकार रहेकाले कतै उनलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिने त होइन भन्ने शंकाउपशंका भइरहेको छ ।